I-Palm Springs, i-CA • Ukuhlikihlizwa komzimba ne-NuRu Massage
Bhuka ukubhucungwa komzimba wakho ne-nuru massage ePalm Springs, CA.
IPalm Springs idolobha eliyihlane eligudle uRiverside County, eCalifornia, e-United States, ngaphakathi kweCoachella Valley yaseColorado. Idolobha lihlanganisa cishe amakhilomitha-skwele angama-94 (240 km2), okwenza kube idolobha elikhulu kunawo wonke eRiverside County ngendawo yomhlaba. Yonke enye indawo eyisikwele yedolobha iyingxenye yokubhuka komhlaba wama-Agua Caliente Band waseCahuilla. Bhuka i- ukugcotshwa komzimba ne-nuru massage ePalm Springs, CA.